I-African American icela indlela yokuguqula ukuhlanza amanzi angcoliswe uwoyela - i-Afrikhepri Fondation
I-African American isungula indlela yokuguqula ukuhlanza amanzi angcoliswe uwoyela
OFOkujwayelekile, u-Arden Warner usebenzisana ne-physics yama-accelerators, okungukuthi, izinkinga abahlangabezana nazo lapho amaqoqo ezinhlayiya esheshiswa ukwakha imishayo ezinzile emiselwe ukushayisana. Uyilungu leFermilab ngakho-ke umsebenzi wakhe waba nemiphumela ekuzingeleni izinhlayiya ze-supersymmetric kanye nesifuba esidumile seBrout-Englert-Higgs neTevatron. Eminyakeni emine eyedlule, ngenkathi unkosikazi wakhe embuza ukuthi ayikho yini indlela ephumelelayo yokulwa nokuchitheka kukawoyela okudalwe ukuqhuma kwe-Deepwater Horizon, umcwaningi wayenombono ogqamile. Kungani ungasebenzisi amandla kazibuthe ukuqoqa ukushelela kukawoyela?
Yiqiniso, i-petroleum ngokwayo ayinamandla kazibuthe, kodwa isazi semvelo sasizibuza ukuthi akunakwenzeka yini ukusiguqula sibe uhlobo oluthile lwe-ferrofluid. Khumbula ukuthi lesi yisisombululo se-colloidal se-ferromagnetic noma i-ferrimagnetic nanoparticles ye-oda lama-nanometer ayi-10 ku-solvent noma emanzini. Kwakungusokhemisi uStephen Papell owenza i-ferrofluid yokuqala ngokuxuba i-powder ka-magnetite ne-dukerosene, ngakho-ke uphethiloli otholakala ku-petroleum, phambi kwe-oleic acid. Kunamavidiyo amangazayo abonisa isenzo sendawo kazibuthe ku-ferrofluid bese iziphatha njengohlobo luketshezi kazibuthe olunamandla.
Shintsha i-petroleum ibe yi-magnetorheological fluid
UWarner wayefuna ukuthola, futhi ngalokho waqala wenza izivivinyo ezilula egalaji lakhe ngozibuthe wasefrijini kanye nokufakwa kwensimbi emafutheni emoto. Ekhuthazwe yimiphumela yokuqala, isazi semvelo senza ucwaningo olunzulu ngalesi simo. Kwavela ukuthi umuntu wayengathola, hhayi i-ferrofluid, kodwa i-magnetorheological fluid ene-petroleum. Izinhlayiya, kulokhu, zingu-micrometric ngosayizi futhi kukhona umehluko othile ekuziphatheni koketshezi lwe-magnetorheological uma kuqhathaniswa ne-ferrofluid. Izinhlayiya zensimbi noma uthuli lwe-magnetite olusetshenziswa yi-Warner lunosayizi ophakathi kwamamitha amabili no-2. Ngazo, kutholakala uketshezi olubonakalayo olulandela ukuhamba kwalezi zinhlayiya lapho licwiliswa kumandla kazibuthe. Isazi semvelo senze amanye ama-video akhombisa ukusebenza kwendlela yakhe. Kubaluleke nakakhulu uma izinhlayiya zikasibuthe ezisetshenziswayo nazo ziyi-hydrophobic, okusho ukuthi zizojwayela ukugxila kumafutha.
Indlela ka-Arden Warner iyathembisa futhi, ngaphezu kwalokho, usevele ufake iphathenti. Ngaphezu kwakho konke, inenzuzo yokuba nobungani bemvelo, ngoba i-magnetite itholakala ngokwemvelo olwandle. Empeleni, ingahle ibe enye indlela kuma-dispersants asetshenziselwa ukulwa nokuchitheka kukawoyela. I-BP, ngokwesibonelo, isebenzise iCorexit 9500 ukusabalalisa uwoyela kuma-microdroplets ngesikhathi sokuchitheka kukawoyela ngo-2010. Akuwona nje kuphela ukuthi lo mkhiqizo unezingozi ezithile kubantu, kodwa umthelela wawo ohlelweni lwezinto eziphilayo zasolwandle awuqondakali kahle esikhathini eside esizayo.
Ummo, unkulunkulu ovela kwenye indawo - Christel Seval (PDF)
Umlando Jikelele wase-Afrika - Vol 2 (PDF)
I-Wrestling, umdlalo kazwelonke eSenegal